Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) waxay bilaabayaan inay hirgeliyaan qorshaheeda dhameystiran ee Comprehensive District Design (CDD) kaas oo ka warbixinaya tayada tacliimeed, sinaanta & joogtaynta waxbarashada ardayda ku nool degmada oo dhan. Isbedelada waxaa ka mid ah iskuulada qaar oo noqda iskuulada bulshada ama iskuulada magnatka, isbeddelada qaabeynta fasalada, iyo dib u cusbooneysiinta xuduudaha iskuulka taas oo ka dhalan doonta waxoogaa isbeddelo ah xulashada aaga kaqeybgalka iyo u qalmida gaadiidka.
Markii aan tan diyaarinay, waxaan sameynay wax ka beddel yar oo ku saabsan qaababka iskuulka degmada, oo ay ka mid tahay ka warbixinta isdiiwaangalinta iyo tirakoobka ardayda ee sanad dugsiyeedka 2021-22. Waxaan sidoo kale ku darnay rasaas astaamahan si kooban u sharxeyna wixii isbeddel ah ee la filayo sanadihii hore.
Sidee ayuu hirgelinta CDD saameyn ugu yeelan doonaa dugsigayga hadda? Collapse
CDD-ga wuxuu saameyn ku yeelanayaa iskuul walba si ka duwan sidii hore. Waxaan ku darnay barta wax lagu qoro astaamaha iskuulka degmada oo sharaxaya sida CDD-ga ay saameyn ugu yeelan doonto. Waxaad sidoo kale sahamin kartaa https://mpls.k12.mn.us/somali_3 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama aad ula xiriirto kooxda Adeegyada Meelaynta Ardayda oo ah sps.deparatment@mpls.k12.mn.us
si aad u hesho hagitaan.
Dugsiyadee ayuu ilmahaygu ka heli karaa gaadiid? Balaadhi
Guud ahaan, ilmahaagu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo gaadiid (haddii aanu ku jirin aagga lugaynta) ee dugsiyadda bulshadooda ama wax kasta oo magnet-ka ah ee u adeega fasallada K-8. Xeerar kaladuwan ayaa khuseeya haddii ilmahaagu uqalmo barnaamij gaar ah ee waxbarashada gaarka ah ama barnaamijka dugsiga sare ee magaalada oo dhan ah. Aagagga gaadiidka ee inta badan dugsiyada charter-ka iyo iskuulada madaxa-bannaan saamayn kuma yeelanayso CDD, ka hubi dugsigaaga haddii aad su'aalo qabto.
Iskuulka magnet-ka eeDual Spanish Immersio ee ilmahaygu wuxuu noqon doonaa iskuulka bulshada. Sidee ilmahaygu ugu sii socon karaa barnaamijka noocan ah? Balaadhi
Qaar ka mid ah barnaamijyada tacliimeed ee dugsiyada, sida barnaamijka laba-geeska ah ee Windom, waxay u guuri doonaan dugsiyada magnet. MPS waxay kula talinayaan waalidiinta inay codsadaan iskuulka magnet kaas oo leh barnaamij isku mid ah in cunugaada uu kusii jiro. Waxaan kugula talineynaa inaad codsato inta lagu jiro mudada diiwaangelinta mudnaanta ee Noofambar X-Febraayo X fursadda ugu wanaagsan ee boos lagu helo.
Ardaygayga dugsiga sare ma u baahan doonaa inuu beddelo dugsiga? Balaadhi
Maya. Ardayda dugsiga sare ee dhigata fasalka 9aad, 10aad, ama 11aad ee dugsigooda sanad dugsiyeedka 2020-21 waxaa loo oggolaan doonaa inay sii wataan ka-qeybgalka dugsiga ay hadda dhigtaan iyagoo wata gaadiid (Metro Transit) illaa qalin-jabinta.